Uma ukholwa Darwin wathi wokuthi umuntu wavela uhlobo lwenkawu olungavamile. Uma esecabanga kabusha amapheshana enkolo ke konke emhlabeni, kuhlanganise abantu, uNkulunkulu wadala. Futhi uma siphendukela lwamuva, kungenzeka ukuthi lesi silwane womuntu savela omunye abameleli ekujuleni kolwandle. Mhlawumbe, kuyoba kakhulu lwesintu kuyoba uxabana ngemvelaphi Homo sapiens kweqiniso. Kodwa izici zezenhlalo anthropogenesis Sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi isayensi, ngakho kufanele ababheke.
Into yokuqala okufanele uqale, le ncazelo imiqondo. Azikho idatha okunokwethenjelwa ngomsuka umuntu wokuqala, kodwa isayensi kwenza kube nokwenzeka ukulandelela inqubo yentuthuko yayo kanye kumiswa. kwemvelo - kuba ukwakheka komuntu e inqubo yokuziphendukela kwemvelo. Lokhu kuhlanganisa ukuthuthukisa ngokomzimba, ukuvela yokukhuluma, ukudalwa amathuluzi kanye indlela ngokubambisana yokuhlala. Ngenxa yalolu hlelo, umuntu angase sihlukile kwezinye izilwane ezincelisayo babuye bacale kutfutfukisa njengenhlangano, zilwane ngazinye ezihlakaniphile.
Kakhulu ezwakalayo imfundiso anthropogenesis salokhu inkolelo kaDarwin yokuziphendukela kwemvelo. Ukuvela nezinye izinto eziphilayo bangabantu ababili abahlukene kusukela anthropogenesis womuntu. Eyokuqala ilawulwa kuphela imithetho yemvelo. Man, kuphambene mithetho, ngakwazi ibone amakhono ayo futhi uzisebenzise ezinkambisweni umkhuba, ukushintsha imvelo ukuze ivumelane izidingo zakho.
kwemvelo - inqubo yokuba abantu. Kodwa njengoba wazi, abantu - isidalwa kwezenhlalo, ngakho ukuthuthukiswa yayo kuthonywa hhayi kuphela izici bokuphila. Ngakho, ngokuhamba kwemvelo kwakukhona kwemvelo eye wamvumela ukuba basinde kuphela abantu eziqine. Ngenxa yalokho, lokhu kuye kwaholela ukudlulisela izakhi zofuzo eqinile ukuthi ngcono nge esizukulwaneni ngasinye. Lena ngenye yezinto ezinkulu zokwakheka nendima enkulu e esigabeni sokuqala anthropogenesis. Le nqubo iye unikezwa indoda ithuba zikhule ngokomzimba, babe eziqinile futhi kwaguqulwa.
Ngakwelinye ihlangothi, Friedrich Engels evezwe ukuthi ukuvela lawo izinhlobo zabantu ezahlukaniselwa eside bathonywe izinto anthropogenesis nomphakathi. Lezi zihlanganisa:
Isifiso bahlala ngamaqembu.
izici zokwakheka kanye nomphakathi anthropogenesis kwenziwe "kumuntu kwenkawu." Ngesikhathi lapho izinguquko sezulu, kwehle izindawo ihlathi, Homo sapiens okwadingeka bazivumelanise: ukuma ngemilenze (bipedalism), ukudala amathuluzi ukuze uthole ukudla, ukwakha amaqembu ukuze bazivikele ezilwaneni ezidla ezinye izilwane.
Ukuba indoda yathatha esinabantu abayizigidi eziningana iminyaka. Kusukela ngesikhathi lapho kuqala kwenkawu ezinyaweni zawo, ukuze afinyelele eqophelweni lapho baqala ukuthi ujoyine eqenjini, kwathatha ayizinkulungwane eziningana iminyaka. Ngokuvamile, ukulandelana anthropogenesis zingahlukaniswa izigaba ezintathu:
okhokho Anthropoid. Lezi zihlanganisa wezinkawu, ezingaba sebehamba ngokukhululeka besuka ezweni ku izitho ezimbili aphansi futhi ukusebenzisa izinto ezincane, njenge-amatshe, izinti, amathambo.
Paleoanthropes. Noma abantu basendulo. Bahlala ngamaqembu amancane (imiphakathi) Kuye kwadingeka umbono walokho ukuzingela, ngafunda ukwenza izinto ezilula amathuluzi, wahlala emihumeni bakwazi ukwenza umlilo. Ngaphandle into efana indoda.
Neanthropines. Isakhiwo somzimba somzimba ngokuphelele kuhambisana indoda yesimanje. Sinenkosi amakhono yokuxhumana lasekuqaleni. Ngaphandle ukuzingela, kuvuna izithelo nemifino. Knew indlela yokwakha izindlu, zaveza odongeni imidwebo, ngezikhumba zezilwane bathunga izingubo.
Komphakathi izici anthropogenesis
Anthropogenesis akuyona inqubo eqondile futhi abushelelezi, esigabeni ngasinye kwakhiwa thereof kancane imisinga ukuthi ukuthuthukisa eceleni komunye nomunye. Ngaphezu kwalokho, ngamunye lezinhlangano iba imbangela ukuvela izindlela ezintsha ukuthuthukiswa. Ngakho, lapho kwakukhona umzamo ngokuhlanganyela, kwaba khona isidingo sezisebenzi ukuxhumana, kuhlelembisa izenzo zabo. Khona-ke indoda yasungulwa ulimi. Ngakwelinye ihlangothi, ulimi kwaba nentuthuko ehlukile, futhi ngokuhamba umlando, abantu baye bakwazi ukuthuthela kusukela inkulumo ekubhaleni. A ulimi lokubhaliwe ziyogcwala epithets, tifanisongco, imithetho kanye nezinye ematfuba ibinzana.
Konke lokhu kwaba Sibonga kungenzeka ukuba ukuvela izici zezenhlalo. Sekukonke kukhona izinto ezine nomphakathi ukuthi nethonya elikhulu e esigabeni sokuqala anthropogenesis. Lezi zihlanganisa:
Ukuthuthukisa izinto zokusebenza.
Ubude umsebenzi zabasebenzi.
Ukuthuthukiswa komsebenzi izinqubo.
Manje sibheke ngamunye kubo ngokuningiliziwe.
Ngemva le ndoda yayingazimisele ngezinyawo ezimbili, waqaphela ukuthi kuphephile kakhulu ukuhlanganisa ne zazo siqu. Iqembu nokubambisana eye wavumela abantu bokuqala yokuzingela inyamazane enkulu, futhi ngokuphepha uzulazule e Kwezivulekile. Indawo eqenjini lusho isikhathi indoda ukuba nesimanje amathuluzi. Akazange kufanele njalo kube phezu uqaphile, ngakho zonke ngesikhathi sakhe sokuphumula yayizimisele ukudalwa amathuluzi amasha kanye nokuthuthukiswa ukuzingela isu elisha. Eqenjini ngalinye ukuze sonke sifeze indima yayo: amadoda ezingelwa ukudla, kuyilapho abesifazane asebekhulile kanye nezingane. Ngenxa ukusatshalaliswa nezikweletu kwehle yangenyama.
Ukuthuthukisa izinto zokusebenza
Ngcono amathuluzi ebandleni bekungekhe kukghonakale ngaphandle ekudluliseni ulwazi kanye namakhono isizukulwane esisha amadala. Yingakho asebekhulile ayahlonishwa. Babekwazi bakutshele indlela yokuzingela, okuyinto izitshalo edliwayo, kanjani ukwakha amathuluzi nokunye. D. Njengoba umlando ubonisa, ngasinda kuphela kulawo maqembu eziye wazibonela othisha abaphezulu, babekwazi ukua adlulise ukwaziswa yabo ngayo esizukulwaneni esisha.
Amaqembu ukuthi kwadingeka izikhali ezinamandla nakakhulu, kungathatha ezindaweni engcono, displacing ezinye izakhamuzi izindawo ngaphansi efanelekayo ukuphila. Ngenxa yalokho, basinda emincanyana kakhulu futhi inethiwekhi Yesikhashana, abangagcini nje wathatha phezu kokuhlangenwe nakho kwabanye, kodwa futhi umphelelisi ngayo entsha, ulwazi self-kuluthola.
umsebenzi Ubude zabasebenzi
Ngenxa ekuzingeleni elakhiwa abantu abaningi, i-jikelele co-khona kanye nokudlulisela isipiliyoni esizwe abaphezulu, abantu ithole ithuba lokusinda. Kodwa konke lokhu kuyadingeka izimpawu ezikhethekile ukuthi abelane ngolwazi. Ukuthuthukiswa imisebenzi ngokuhlanganyela Iqembu isibe imbangela yokukhuluma.
Ekuqaleni, abantu ukuxhumana ngokusebenzisa ukushukuma komzimba, isimo sobuso, ukusebenzelana imisindo ngabanye. Ilaka ongakasetshenzwa kancane kancane savela ibe apharathasi vocal, futhi le ndoda yakwazi ukufunda indlela entsha ukuze adlulisele ulwazi.
Ngokuphambene, ezincelisayo ephakeme ukuthi aphendule izinguquko imvelo esebenzisa izinhlaka amehlo ezimpumputhe, izindlebe kanye lokuhogela, abantu baba nethuba ukusebenzisa yesibili uhlelo isignali. Homo sapiens uyakwazi asebentisa emagama ukuhlela izenzakalo nomyalezo omfushane. Lona omunye umehluko oyinhloko phakathi komuntu nezilwane, isici eyinqaba, okuyinto sawela, umuntu waba inhloko nemvelo.
Ukuba khona inkulumo kanye nomsebenzi ilunga eqinisa izibopho phakathi amaqembu abantu. Baqala ukusebenza kangcono ndawonye. Kodwa zonke emhlabeni babe namanye amaqembu nganoma yisiphi isikhathi kungaba push izimbangi endaweni ukuthi bengafanele ukuze uhlalwe. Ngaphezu kwalokho, izimo zezulu babe ezingalindelekile, kodwa-ke kwakudingekile ukuba asinde.
Ngokuqondene nalokhu isigaba sabantu lasendulo sathuthuka. Into yokuqala abaqala - kungcono amathuluzi. Kamuva, kuyinkimbinkimbi futhi umshikashika icubungula ngokwabo. Ngaphandle ukuzingela, abantu baqala ukubuthana izithelo nemifino, ngezinye izikhathi ngisho kuthathwe uju izinyosi zasendle. Kodwa indima esemqoka kule nqubo ye anthropogenesis nakanjani wadlala ukusetshenziswa umlilo. ukudla okuphekiwe ku kwaba tastier okuningi. Ngaphezu kwalokho, ukudla okunjalo akusho ukulayisha apharathasi masticatory, futhi ngemva inkawu yeminyaka imisipha enamandla ukuhlafuna namathambo yokuxhuma bameleli walahlekelwa ukubaluleka kwabo.
Ngemva ukubukeka yokukhuluma isho kubantu itjheje isenzakalo esiphawulekayo we- cortex cerebral. Ngebanga lalokho, lokhu kwaba nesandla ukucabanga ukuthi wenza ukusinda inqubo akukalungi kahle ngakho zingangentaba.
Komphakathi izici anthropogenesis nendima inqubo yokuba abantu. Kodwa kwakungenakwenzeka ngaphandle noshintsho kokuqala. Futhi, uma olunye ushintsho bokuphila ziye zenzeka ngenxa izici zezenhlalo ukushayela kwemvelo.
Inqubo yokuba umuntu aluthatha esinabantu abayizigidi eziningana iminyaka. Indoda Modern - kuwumphumela neketanga eside izinguquko, ezisabalele ngokusebenzisa umlando emngceleni: esikhathini lapho kwenkawu lokuqala ezinyaweni zawo, ngaphambi obhekwe ubuchwepheshe obusha.
Izinhlobo Iphutha: esihlelekile, okungahleliwe, ngokuphelele, eseduze
Ukuguquguquka Imajini - ithuluzi eliphumelelayo ikusasa zokuhweba